Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya oo isku raacay xil kororsi 3 sanno ah oo sharciyaynaya jiritaanka golaha wakiilada. – Radio Daljir
Febraayo 3, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Feb 03 – Fadhi ay maanta yeesheen mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Somaliya ayaa ay kaga doodeen mustaqbalka golaha wakiilada oo xilligiisu ku eg yahay bisha Ogoosto ee sannadkan. Doodo ay is-weydaarsadeen mudanayaashu kadib ayaa ay cod aqlabiyad ah isku raaceen in mudada golaha wakiilada lagu siyaadiyo 3 sano.
Go’aanka mudanayaasha ayaa ka shidaal qaadanaya go’aan ay todobaadkii hore gaareen madaxda wadamada IGAD oo ku taliyey in mudada loo siyaadiyo baarlamaanka.
Sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanku Shariif Xasan, waxaa fadhiga maanta goobjoog ahaa 435 mudane ee 550 xildhibaan ee golaha; 421 ka mid ah ayaa u codeeyey in mudada golaha la siyaadiyo muddo 3 sano ah, halka 11 ay diideen, 3-na ay ka aamuseen.
Go’aanka ay gaareen maanta xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliya ayaa la yaab ku noqday in badan oo danaysa danaha Somaliya, kuna tilmaamay go’aanka mid aan xil kas ahayn.
Baarlamaanka ayaa asalkiisa la dhidbay sannadkii 2004 (Nairobi); waxaa 2 sano lagu daray xilligiisa sannadkii 2009 (Jibuuti), halka xilligiisu ku eg yahay bisha Ogoosto ee sannadkan, 2011.